I-Wireframing yamahhala futhi elula neWireframe.cc | Martech Zone
NgoLwesihlanu, January 4, 2013 NgoLwesihlanu, January 4, 2013 Douglas Karr
Mhlawumbe kufanele siqale ngalokho okushiwo yi-wireframing! Ukwenza ucingo kuyindlela yokuthi abaklami babonise ngokushesha ukwakheka kwamathambo ekhasini. Amafreyimu wocingo abonisa izinto ezisekhasini nobudlelwano bazo komunye nomunye, azibonisi ukwakheka okungokoqobo okuhlanganisiwe okuhlanganisiwe. Uma ufuna ngempela ukwenza umklami wakho ajabule, banikeze ngefreyimu yesicelo sakho!
Abantu basebenzisa yonke into kusuka epeni nephepha, kuya kwiMicrosoft Word, kuya ku- izinhlelo zokusebenza ezithuthukisiwe zokubambisana zocingo ukuklama nokwabelana ngama-wireframes abo. Sihlala njalo sifuna amathuluzi amahle futhi kubonakala ngathi ngunjiniyela wethu, UStephen Coley, ithole enkulu encane kakhulu ekhululekile ukuyisebenzisa - I-Wireframe.cc
I-Wireframe.cc inezici ezilandelayo
Chofoza bese uhudule ukudweba - Ukudala izinto ze-wireframe yakho bekungeke kube lula. Ukuphela kokufanele ukwenze ukudweba unxande kundwangu bese ukhetha uhlobo lwe-stencil oluzofakwa lapho. Ungakwenza lokho ngokuhudula igundane lakho ungene ngendwangu bese ukhetha inketho kusuka kumenyu ezivelelayo. Uma udinga ukuhlela noma yini mane uchofoze kabili.
Isibonisi esikhulu kakhulu - Esikhundleni samabha wamathuluzi nezithonjana ezingenakubalwa esazi sonke kusuka kwamanye amathuluzi nezinhlelo zokusebenza iWireframe.cc inikeza imvelo engenamfuhlumfuhlu. Manje usungagxila emibonweni yakho futhi uyidwebe kalula ngaphambi kokuba iphele.
Chaza kalula - Uma ufuna ukuqiniseka ukuthi umyalezo wakho uyafika ungahlala uphawula ku-wireframe yakho. Izichasiselo zenziwa ngendlela efanayo nanoma iziphi ezinye izinto kukhanvasi futhi zingavulwa zicishwe.
Iphalethi elinganiselwe - Uma ufuna ukuthi amafreyimu wakho wocingo abe mnandi futhi acace kufanele uwagcine elula. I-Wireframe.cc ingakusiza ukufeze lokho ngokunikeza iphalethi elinganiselwe kakhulu lezinketho. Lokho kusebenza kwiphalethi yombala kanye nenombolo yama-stencils ongakhetha kuwo. Ngale ndlela ingqikithi yomqondo wakho ayisoze yalahleka emihlobisweni engadingekile nezitayela ezinhle. Esikhundleni salokho uzothola i-wireframe ngokucaca komdwebo odonswe ngesandla.
Iziphakamiso ezihlakaniphile - I-Wireframe.cc izama ukuqagela ukuthi uhlose ukudweba ini. Uma uqale ukudweba into ebanzi futhi ezacile kungenzeka ukuthi ibe yisihloko kunescrollbar esiqondile noma isiyingi.Ngakho-ke, imenyu ye-pop-up izoqukatha kuphela izithonjana zezinto ezingathatha lo mkhuba. Okufanayo kuya ekuhleleni - wethulwa kuphela ngezinketho ezisebenza entweni ethile. Lokho kusho ukuthi izithonjana ezahlukahlukene kubha yamathuluzi yokuhlela isigaba nokuhlukile kunxande olula.
Amawebhusayithi we-Wireframe nezinhlelo zokusebenza zeselula - Ungakhetha kumathempulethi amabili: iwindi lesiphequluli kanye nomakhalekhukhwini. Uhlobo lweselula luza ngokuma okumi mpo nokwakheka kwezwe. Ukushintsha phakathi kwezifanekiso ungasebenzisa isithonjana ekhoneni eliphezulu kwesokunxele noma umane ushintshe usayizi wendwangu usebenzisa isibambo ekhoneni laso langakwesokudla ngezansi.
Kulula ukwabelana nokuguqula - Ifreyimu ngayinye oyigcinayo ithola i-URL eyingqayizivele ongayibeka uphawu lokubekisa noma wabelane ngayo. Uzokwazi ukuqhubeka nokusebenza kumklamo wakho nganoma yisiphi isikhathi ngokuzayo. Zonke izinto zefreyimu yakho zingahlelwa noma ziguqulwe zenziwe enye into (isb. Ibhokisi lingaphendulwa libe yisigaba).
Tags: saasdesign webamathuluzi wokuqamba iwebhui-wireframeamathuluzi we-wireframeukubhebhanaamathuluzi wokucindezela izintambo